Ahụmahụ Semalt: Google Maps Dị ka Ụdị Ọhụrụ nke Social Media Marketing
Ọ bụghị ogologo oge gara aga, Google Plus bụ onye isi na-enye ihe niile gbasaraazụmahịa obodo. Otú ọ dị, Google My Business amalarị ebe nrụọrụ weebụ maka ndị nwe ụlọ ahịa. Taa, ndị ọrụ nwere ike iji Google Maps mee ihe yiri yaarụ ọrụ. Ụfọdụ nyocha nyocha SEO na-ele Google Maps dịka mgbasa ozi ọha na eze na ngbanwe. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ewerewo usoro a iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe yausoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-amị mkpụrụ na Google Maps.
Google Maps abụghị ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ ma ọ nwere ihe ụfọdụ na-emekarịusoro ntanetị mgbasa ozi - laptop repair shop in san francisco. Omenala Social Media Marketing (SMM) na-ejikarị Google Maps dịka na netwọk mmekọrịta. Google Maps nwereenwe ike ịbawanye ikike gị.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọcha ,Nik Chaykovskiy na-akọwa atụmatụ ndị dị na map Google, nke nwere ike inwe mmetụta na ntụgharị ndị ahịa.
Nchịkọta nke azụmahịa na map
Ọ bụla azụmahịa nwere kaadị, nke nwere ozi dị ka data ọnọdụ, ọnụ ọgụgụ kpakpando,nyocha ndị ahịa, na foto nke ụlọ ọrụ ahụ. Na akụkụ kacha elu, enwere nchịkọta ozi dịka foto mkpuchi, ọnụahịa ọnụahịa nadollar, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, ụtụ ahịa na njikọ maka ntụziaka ebe obibi. Map Google na-enye otu ikpo okwu yiri otumaka mgbasa ozi mgbasa ozi gụnyere:
Chekwaa atụmatụ. Otu nwere ike ịchekwa ọchụchọ ma ọ bụ saịtị ahụ iji zoo aka na ya mgbe e mesịrị.
Na nso nso. Nke a bụ ozi banyere azụmahịa dị otú ahụ na ụdị ahụ n'imenweta site na ọnọdụ onye ọrụ ugbu a. Google na-ekwuputa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% n'ime ndị a achọpụtara si na ihe nchọgharị weebụ..Nke a rụpụtaraeme ka ọ dịkwuo mkpa maka ịmegharị mkpanaka gị.
Zipụ na ekwentị m. Ndị na-eji ọrụ Google nwere akaụntụ Google nwere ike iji njirimara a kee okenjikọ ma ọ bụ ọnọdụ azụmahịa.
Share. Enwere ikike iji nyere ndị ọrụ aka iziga ozi onye ọrụ dị iche icheebe. I nwere ike ime ka njikọ ahụ dị mkpirikpi site na iji koodu nkata Google nyere.
Ngalaba nke Google Maps
Ndị ọrụ na-ahụ foto. Ndị ahịa nwere ike ịkọ foto na mpaghara a.E nwere ebe a kapịrị ọnụ maka njirimara onye ọrụ. Onye ọrụ nwere ike ịba ụba ahịa ma ọ bụ ọbụna hapụ okwu. Ndị ọrụ nwere ike ịmepụta map ndị omenalaebe ha nwere ike ịgụnye "mmasị" ha kachasị amasị dịka azụmahịa.
Ulo oru ndi ozo kwesiri igba ndi oru ume inyocha ulo oru. Ndị mmadụ nwekwara ike bulitefoto ha iji mee ka ndị mmadụ hụ ihe ha na-atụ anya. Ka otu ụlọ ahịa nwere nyocha, otú ahụ ka ụlọ ọrụ ahụ na-enwekwu ọgbọka ndị ọgbọ na-ekerịta. Ndị ahịa nwere ike ige ntị n'ihe ndị ahịa na-ekwu ma mee mgbanwe ndị dị mkpa.
Google Maps bụ mpaghara nke Google Plus. Ná mmalite, Google mesiri ike ikenetwọk mmekọrịta mpaghara maka azụmahịa. N'oge a, map Google nwere ike ịnwe ọnọdụ yiri ya na mgbanwe ndị ọhụrụ na Google algorithm.Google Maps nwere ike ọ gaghị abụ netwọk mmekọrịta ma nwee ụfọdụ njirimara ndị metụtara mmekọrịta ahịa mgbasa ozi. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ na-enweta oherekwalite ọrụ ha na ọrụ ha site na itinye ebe. Onye nwere ike ime ka SEO jiri meta na mkpado ma kwụọ ụgwọ ma kwụọ ụgwọmgbasa ozi ezubere iche. Google na-ekwusi okwu ike banyere SEO dị iche iche yana ịme ka ndị ahịa jiri ọnọdụ ha. Googlemap nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu n'ahịa dị ka mgbasa ozi ọha na eze.